Voatetin’ i Tantine Louisette, kandida HVM, laharana faha-03 ao amin’ny bileta tokana , avokoa ny fokontany sivy ambin’ny roapolo ao Kaominina Ampanitokana. Kandida Ben’ny Tanana amin’ny 31 jolay izy ary efa nitondra ny kaominina teo aloha. Betsaka ny zava-bitany nandritra ny fitantanany ary mbola misy ny fanamby tsy tanteraka ka tokony ho tohizana sy faranana. Anisan’izany ny fanomezana kopia sy kara-panondro maimaim-poana isam-pokontany, ny famatsiana rano fisotro madio, fanamboarana Lycée , Akany Tiana ary ny Birao Ifotony momban’ny Fananan-tany na BIF,..
Manana fifandraisana amin’ny mpamatsy vola i Tantine ka izany indrindra no nahavitany nampandroso ny kaominina hatrizay.
Nafana dia nafana ny famaranana ny fampielezan-kevitra nataony izay teo amin’ny fokontany Antanetyb misy ny toeram-ponenany no nanatanterahina izany. Tonga nanotrona tao ireo mpanara-dia azy ao amin’ny fokontrany sivy ambin’ny roapolo. Fanentanana, kilalao sy fizarana loka no nanamarihan’ity kandida HVM laharana faha-03 ity ny faradoboka ary nofaranana tamin’ny fiarahana nisakafo izany.
‹ Kandida TIM laharana faha-03: Nirodorodo ny vahoakan’ Ampitatafika	› Harilala Ramanantsoa: Azo harenina tsara ny tanana an’Antananarivo.
juil 30, 2015	@ 09:09:29
Tsiky Misento liked this on Facebook.